Ngabe amaSoftware aku-Intanethi akhomba Umngani WePulatifomu noma Umncintiswano? | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 26, 2017 NgoLwesine, ngo-Okthoba 26, 2017 Douglas Karr
Umngani wami ungicele ukuthi ngibuyekeze ipulatifomu yabo kusayithi lesikhombi esivela eceleni kuleli sonto, ethi isayithi lishayela ithrafikhi impela kwabanye abathengisi embonini. Ngenze ukuhlaziywa okusheshayo kwesiza senkomba futhi kuyiqiniso, bathole amazinga aqinile embonini yomngane wami. Kubukeka kunengqondo ukuthi kufanele bacele ukubuyekezwa ukuze babonakale kangcono enkombeni.
Inkomba akuyona indawo encane, inkulu kakhulu. Inezilinganiso ezinhle kakhulu zenjini yokusesha, abasebenzi bezentuthuko, ukuzibandakanya kokumaketha ezokuxhum, kanye nesabelomali sokukhangisa esikhokhelwayo. Ngoba ithrafikhi yayo inzima kakhulu futhi ingashayela ababukeli abaningi abafanele kumapulatifomu, futhi inohlelo lokukhangisa lwangaphakathi olukhokhelwayo lapho umngane wami angathenga khona iphrofayili evelele kakhulu noma abonise izikhangiso emakhasini afanele.
Uhla lwemibhalo lutholakala ezinjinini zokusesha zamagama afanele ahlobene nepulatifomu.
Umsebenzisi wenjini yokusesha uchofoza enkombeni lapho bethola khona ipulatifomu yakho eduze kwawo wonke umncintiswano wakho.
Abasebenzisi benjini yokusesha abambalwa bachofoza enkampanini yakho. Eziningi zilahlekile kulabo oqhudelana nabo, ikakhulukazi uma benesabelomali esikhulu sokukhangisa ngaphakathi kwesiqondisi.
Nansi inkinga ngalolu hambo… akuyena umngani wasepulatifomu, ngumncintiswano wabo. Ipulatifomu imisa ngamabomu amathemba akho, iwaphambukisela kusayithi lawo, ukuze izethameli zenze imali lapho. Ukhuthaza umkhombandlela kubasebenzisi bakho ukubeka izibuyekezo - abakwenzayo - okuthuthukisa izinga lokusesha lomkhombandlela. Ngaleso sikhathi, izishayela ijule phakathi kwakho namathemba akho. Manje usuncike enkombeni ukuze wondle ibhizinisi lakho.
Wakha ubukhona be-inthanethi obunamandla, usezingeni elingcono kunenkomba.
Amathemba awuziba umkhombandlela bese aya ngqo kokuqukethwe kwakho, akakaze wethule umncintiswano.
Okuqukethwe kwakho okuhambisanayo, okuphoqayo kuheha isivakashi ukuba sihole, kuholele kumakhasimende.
Lowo mkhombandlela awunethuba elingcono lokukushaya kumiphumela yenjini yokusesha ukwedlula wena, kungani ungabasiza? Kungani ungabakhokhela, uxhase isiza sabo, futhi okwamanje, basiza izimbangi zakho? Kungafana nomuntu omi phambi kwesitolo sakho, uvakashele indawo ongaqhudelana nayo, bese ekucela ukuthi ubakhokhele ukuze uqiniseke ukuthi bayabuyisa esitolo sakho. Ungabakhahlela emnyango wakho, akunjalo?
Kufanele ubheke noma yisiphi isisetshenziswa semvelo njengombili umngani nencintisana. Vele, bangaba nethuba lokushayela ithrafikhi emangalisayo beze kuwe. Kepha kuzindleko zakho. Udinga ukunquma ukuthi ulungile yini noma cha kulokho kuncika futhi uzimisele ukuqhubeka ukhokhela ukufinyelela zabo izilaleli.
Bengingeke. Futhi angikubhalanga ukubuyekezwa kwepulatifomu yomngane wami.
Tags: izinkombaizinkomba zohlelo lokusebenza onlineisiqondisi se-saas esiku-inthanethiizinkomba zepulatifomuizinkomba zesoftware